Ronono nasiana chocolat blanc : mampitony, mampidina tosi-drà, mahatanora …
“Smoothie à la pastèque”, manampy amin’ny fanalana ny rivotra ao amin’ny kibo
Zava-pisotro natoraly izy ity ary ny fisian’ny pasiteky aminy, izay voankazo anisan’ny manan-karena rano sy potassium ary ny fananany kaloria ambany dia anisan’ny mampitony amin’ny fisian’ny rivotra ao amin’ny kibo indrindra amin’izao andro mangatsiaka izao.
Zava-pisotro amin’ny “vinaigre de cidre” sy tantely : mampahita tory
Akora natoraly mampitony ny vatana sy mampahazo aina ny tantely sy ny “vinaingre de cidre”.
Dite kanelina misoroka ny aretin-dririnina
Sady mampafana amin’izao andro mangatsiaka izao no mahasalama ity zava-pisotro ity. Rehefa mangastiaka toy izao mantsy ny andro dia mora handairan’ny karazana aretina toy ny kohaka, ny gripa, ny vatana. Ity zava-pisotro vita amin’ny episy ity dia miady amin’ireo karazana mikraoba mitondra ireo aretina ireo.
Jus akondro sy epinara mampihena kibo
Ahitana otrik’aina izay manadio ny rano sy mandoro ny tavy anatin’ny vatana ny akondro ka mety ho an’ireo mampihena vatana. Ity zava-pisotro manaraka ity izao dia mampihena ny kibo. Natoraly no sady ara-pahasalamana tanteraka izy ity. Araho ary ny fikarakarana izany.
Zava-pisotro amin’ny kanelina mamparani-tsaina
Ny fifangaroan’ny tamotamo, kanelina ary tantely dia manampy amin’ny fiasan’ny atidoha. Mitondra ireo singa rehetra ilain’ny atidoha ihany koa ny fifangaroan’ireo akora ireo ka mamparanitra saina. Andramo ary ity zava-pisotro ity mba handrangitana ny saina.
Jus voasarimakirana sy tongolo gasy : Mahaela velona
Isan’ny taova fototra miantoka ny fahasalaman’ny vatana ny lalan-drà.
Misoroka ny fofona ratsy avoakan’ny vatana amin’ny sakafo
Ny sakafo sy zava-pisotro izay hanina sy sotroina dia misy vokany amin’ny fahasalamana, ny fihetseham-po ary ny fofona izay avoakan’ny vatana.
Tena mety amin’izao vanim-potoana avy orana izao ity zava-pisotro vita amin’ny sôkôla fotsy ity. Rehefa harivariva avy orana sy reraky ny tontolo andro iny dia tena mampitony sy manala ny rarin-tsaina izy ity. Tena tsara ho an’ny fo izy ity ary mampidina ny tosi-dra ihany koa. Eo ihany koa ny tsirony izay tena miavaka ka hahafahana manadino ny sorisory nandritra ny tontolo andro.
Akora ilaina ( ho an’ny zava-pisotro 4 kaopy)
sôkôla fotsy 120g
“Crème liquide entière » 20cl
Azo ampiana « chantilly » hanaingoana azy
Alefa ao anaty vilany iray ny ronono sy ny “crème liquide”dia ampangotrahina.
Kikisana ny sôkôla ary zaraina mitovy amin’ireo kaopy asiana azy.
Araraka ao anatin’ny kaopy ilay ronono sy “crème liquide” nangotraka ary aroana tsara mba hitsonika ny sôkôla.
Raha tiana ampiana “Chantilly” dia araraka eo ambonin’ilay zava-pisotro fotsiny izany ary afaka ampiana kanelina ihany koa.
Tsara ho an’ny fo
Toy ny sôkôla rehetra dia tena tsara ho an’ny fo sy ny lalan-dra ny sôkôla fotsy. Misoroka ny aretin’ny fo mantsy izy io ary mampalefaka ny lalan-drà ihany koa ka mampidina ny tosi-dra. Ankoatra izay dia efa iaraha-mahalala fa tena mampitony ny zava-mamy. Ny tsiro miavaka ananan’ny sôkôla fotsy dia isan’ny tena mandaitra raha te ho tony. Ny fisotroana ity zava-pisotro ity araka izany dia tena mampitony sy manala ny rarin-tsaina mandritra ny tontolo andro. Ankoatra ireo rehetra ireo dia fantatra fa mahatanora lalandava ihany koa ny sôkôla fotsy.